အုန်းလွင်၊ ဦး(ပန်းချီ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ပန်းချီဦးအုန်းလွင် ကို မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ် တံခိုင်တိုင် ကျေးရွာမှ အဖ ဦးငယ်၊ အမိ ဒေါ်ရွှေသဲ တို့မှ ၁၉၀၇ ခု အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်း ၇ ယောက် ရှိပြီး အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ မွေးချင်းများမှာ ဦးမြသင်း၊ ဦးစောဖေ၊ ဦးငွေကိုင်၊ ဦးစိန်ဂိုင်၊ ဒေါ်ကြင်မေ၊ ဒေါ်တင်ညွန့် တို့ဖြစ်ကြသည်။ ငယ်မည် အပါ ဖြစ်သည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သာယာဝတီ (B.M.A) ကျောင်း၊ ပြည်မြို့အထက်တန်းကျောင်း နှင့် ရန်ကုန် မက်သဒစ် ဟိုက်စကူးကျောင်း များတွင် အဋ္ဌမတန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ကျောင်းမှ ပြုလုပ်သော ဘေဒီရှိုးပြပွဲ၌ ဦးအုန်းလွင်၏ လက်ရာကို ပညာဝန် ဒေါ်မြစိန် က တွေ့ရှိသဘောကျသွားသဖြင့် ဝင်ဆာနှင့် နယူတန် ကုမ္ပဏီ မှ ပန်းချီပစ္စည်း ၂၀ ဖိုး ဝယ်ယူခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ပြည်မြို့၌ အဋ္ဌမတန်း အောင်သောအခါ ၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ မေလတွင် မြန်မာအဆွေ ကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်ဝေသည့် ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်း က ကျင်းပသော ပန်းချီပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ စတုတ္ထဆု ရရှိခဲ့သည်။ ဦးဘလုံက ပထမ၊ ဦးမောင်မောင်တင်က ဒုတိယ၊ ဦးစုက တတိယ၊ ဦးအုန်းလွင်က စတုတ္ထ ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၂၆ ဇူလိုင် တွင် မြန်မာအဆွေကုမ္ပဏီ၌ လခ ၄၀ ကျပ်ဖြင့် ပန်းချီဆရာ အဖြစ် ဝင်လုပ်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ခန့်ကြာသော် ဦးဘလုံ က ခေါ်သဖြင့် မြန်မာအဆွေ မှ ထွက်ကာ ဘလုံအုန်းလွင် စတူဒီယို ဖွင့်၍ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဘားမားအတ်ကလပ်တွင်လည်း ဦးဘဉာဏ်၊ ဦးဘဇော် တို့၏ ပန်းချီ သင်တန်းတွင် ရေဆေးပညာကို လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၂၉ တွင် ဗြိတိသျှဘားမားမှ ဦးစံလွင် ခေါ်သဖြင့် လက်ထောက်ပန်းချီဆရာ အဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သည်။ ၁၉၃၂ တွင် လခစား ပန်းချီဆရာ အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ကာ လွတ်လပ်သော ပန်းချီဆရာဘဝဖြင့် ရပ်တည်သွားသည်မှာ ကွယ်လွန်ချိန်အထိဖြစ်သည်။
တွံတေးသူ မသန်းနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။ ၁၉၃၆ မှ ၁၉၄၃ အထိ မအုန်းနှင့် ပေါင်းဖက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ တွင် မုဒုံမှ မအေးကြည်နှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် မျက်စိကွယ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် နံနက် ၃ နာရီတွင် ကွယ်လွန်သည်။ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ရေတွင်း သုသာန်၌ ဂူသွင်းသဂြိုဟ်ခဲ့သည်။ 
↑ ဝင်းသဉ္ဇာမျိုး (၂၀၀၂ ခုနှစ်). ပန်းချီဦးအုန်းလွင်, ပထမအကြိမ်. စာပေဗိမာန်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အုန်းလွင်၊_ဦး(ပန်းချီ)&oldid=391408" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈၊ ၁၁:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။